Kwembulunga ngaso sonke isikhathi sihambisana kuqale ukwakhiwa imisebenzi esemqoka. Isebenzisa kakhulu imishini ehlukahlukene kanye nemishini.
Akuyona imfihlo ukuthi i kagesi usimende mixer It iyithuluzi elibalulekile kunoma iyiphi ukwakhiwa. Lena yindlela yokudukisa esikhethekile ukuxuba ezihlukahlukene izingxenye - kokubili kanzima futhi okuxekethile. Ukusebenzisa le mishini kungenzeka ukudala esigqulweni eyohlobo noma mix ukhonkolo yamanzi, usimende, amatshe nesihlabathi.
Ngokuvamile, kagesi semende ifakwe isigubhu ekhethekile ligijima, okuyinto ihlangana zonke izingxenye zomzimba esiyinhlanganisela esizayo. Inqubo okuqhubekayo futhi unikeze iyunifomu Chute motor kagesi.
Kukhethwa emasu lafana kagesi usimende mixer, ixhomeke injongo yokusetshenziswa ezihloselwe ukusetshenziswa noMkhiqizo. Imishini kungadingeka njengoba inkampani enkulu, kanye izidingo siqu.
Ngosizo labathaki bamafutha ezinkulu ukhonkolo ukwakha amachibi ngisibeke isisekelo zezakhiwo, futhi imishini oversized iye yasetshenziswa ngempumelelo yokuqedela ngabanye kanye umsebenzi wokulungisa, kanye nekwakha amathrekhi ukhonkolo. Noma kunjalo, encane kagesi mixer iloli njalo, ngisho isakhiwo esikhulu, ngoba lubaluleke esimweni lapho kunesidingo esiphuthumayo ukulungiselela esincane isixazululo.
Namuhla e emakethe yasekhaya anhlobonhlobo imishini enjalo. Yiqiniso, umsebenzisi kunenzuzo kakhulu ukuba uxhumane nomthengisi, esebenza ngokuqondile nezinhlangano umenzi.
Kanjani kagesi usimende mixer, intengo efanele akhethiwe okuyinto incike nemingcele yayo eyinhloko yezobuchwepheshe kanye Ukucaciswa? Ezitolo ungakwazi sithathe kukho olukhulu izinjongo zasekhaya at an ngentengo eqolo. Ngokwesibonelo, ukhonkolo mixer BX 65l kubiza ruble 5950 kuphela.
Ngakho, umthengi okungahle kwenzeke, kufanele sinake izidingo supply. 380 engama-volt angu amayunithi asetshenziswa kuphela kumasayithi letinkhulu tekwakha. Ezintathu okhombisa uxhumano isetshenziswa kuphela imishini yobuchwepheshe.
Njengoba izindlu zangasese, ikhambi elingcono kakhulu ukhonkolo mixer 220V kagesi. Kuyinto lokhu ukungezwani kwamukelekile izindlu ngabanye. Uma umthengi efisa ukuthenga mixer injini at 380, ke eminye idinga generator ebizayo, odala wamanje nalezi zici.
Lezi zindlela ezilandelayo ngoba amasu Ukukhetha - uthemba umakhi. Akusiyo imfihlo ukuthi kwathiwa izinkampani imishini efakazelwe ukukhiqiza nqampuna umhlabeleli, ngoba isipiliyoni elide emakethe.
semende kufanele kuhlangatshezwane nezidingo umnini wayo futhi babe, isibonelo, amandla adingekayo. Uma umthengi kuhlelwe umsebenzi wokulungisa ezincane, inani singadluli amalitha 100, futhi ukuze kwakhiwe izindlu ngabanye 1-2 izibuya kwakuzodingeka mixer 130 amalitha.
Ayanda amandla motor, ayanda izinga ingxube zizokwenziwa imishini izithako ezidingekayo.
Kukhethwe kagesi usimende mixer Kufanele futhi kube high quality materials kusuka kulo yakhiwa. Umthengi kufanele sinake ngamandla amagonandoda futhi uzimele iyunithi. Ngaphezu kwalokho, kungcono ukuba nibuze ngaphambili ukuthi kuyadingeka ukunakekelwa okwengeziwe.
Kubalulekile ukwazi ukuthenga izinto ezengeziwe ukuze mixer njengoba kudingeka. Njenganoma iyiphi ithuluzi, ngokuhamba kwesikhathi, angaphansi ukugqoka kwamangqamuzana, ngakho uyakhuthazwa ukuba ubonane nomthengisi wakho mayelana esikhundleni izingxenye zokugwema ukuphuka.
Kunoma ikuphi uthintane onguchwepheshe ngaphambi kuthenga ngempela ebalulekile futhi isimo ezidingekayo.
Indlela ukukhetha amathangi amanzi okugeza?
Amanzi heater Electrolux EWH 50 Royal: Incazelo kanye nezici. Ukuhlola kafushane onobuhle Electrolux EWH 50 futhi Royal H Electrolux EWH 50 Royal Isiliva
UAZ onobuhle - zakudala yasekhaya imoto umkhakha
Uyini ukuchayeka izincwadi futhi kanjani it akha?
Izinzuzo abaxhasi eRussia
Sovetsk (Kaliningrad esifundeni): ezindaweni ezithakazelisayo
Electric ukushaqeka nasemiphumeleni yaso
Indlela ahumushe incwadi iphupho ukhiye, kubonakala ephusheni
Poker njengoba ithuluzi ukuthuthukiswa Ingqondo
Amapharamitha nakunethiwekhi amakilasi
Diastema - a ... Ezamazinyo Muhle